Gini mere Wi-Fi ji wepu aka na iphone m? Lee ihe The Real Idozi! - Iphone
chọrọ ịzụta ụlọ na usa
kedu ka m ga -esi gbanyụọ paswọọdụ na iphone m
kedu ka esi ehichapụ foto site na iphone
otu esi akwụsị nkwenye achọrọ na iphone 6
mmelite ụgbọ ala kacha ọhụrụ na & t
Gini mere Wi-Fi ji wepu aka na iphone m? Nke a bụ The Real Idozi!
Gị iPhone anaghị ejikọta na Wi-Fi netwọk nke ọ na-ejikọ na-akpaghị aka. Opened mepee Ntọala -> Wi-Fi iji hụ ihe na-eme, ma chọpụta na bọtịnụ Wi-Fi na-achagharị agba ma ị nweghị ike ịgbanye ya.
Ọ bụrụ na Bluetooth dị na iPhone gị na-egosi wiilị na-agbagharị na Ntọala -> Bluetooth ma ọ gaghị achọpụta ngwaọrụ ọ bụla, aro ndị dị n'isiokwu a nwere ike idozi nsogbu ahụ. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe mere iPhone gị Wi-Fi ji na-acha awọ na usoro i nwere ike ime iji dozie Wi-Fi na iPhone gị.
Ihe edemede a sitere n’ajụjụ m natara n’aka Robert nke anyị iPhone Enyemaka Facebook otu , ebe m na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ịjụ ajụjụ banyere iPhones na teknụzụ ndị ọzọ. Robert kwuru,
dozie iphone mgbe mmiri mebiri
'The wifi button na-greyed-si na-adịghị arụ ọrụ na Bluetooth ga-arụ ọrụ ma (spinning ụkwụ) Biko ị nwere ike inyere?'
Robert, enwere m olileanya: Otu a raara onwe gị nye gị!
Gini mere Wi-Fi ji wepu aka na iphone m?
Na m ahụmahụ, a grayed-esi Wi-Fi button na-egosipụtakarị ngwaike nsogbu na Wi-Fi mpi na gị iPhone. Na ihe nlereanya Robert, iPhone 4S, Wi-Fi antenna na-agba ọsọ n’okpuru ụda isi okwu, oge ụfọdụ ụfọdụ irighiri ihe ma ọ bụ ntakịrị ntakịrị mmiri mmiri nwere ike belata ya.
Igodo Wi-Fi na - acha uhie uhie nwere ike ịmetụta ụdị iPhone ọ bụla, gụnyere iPhone 4, iPhone 5, na iPhone 6 yana iPhone 7, iPhone 8, ma ọ bụ iPhone X, n'agbanyeghị na ọ nweghị ụdị nsụgharị a nwere nkpu isi okwu .
Kedụ ka m ga - esi mara ma eriri Wi-Fi iPhone m mebiri emebi?
Were tọọchị ma tụọ ya mgbado isi isi na iPhone gị. Ọ bụrụ na ị hụrụ irighiri ihe ọ bụla na ebe ahụ, were brọsh ịsa ezé (nke ị na-ejitụbeghị) ma ọ bụ ihe mgbochi na-emegide mgbochi ma jiri nwayọọ hichaa egbe ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere iPhone 4 ma ọ bụ 4S, ị ga-ahụ ntụpọ ọcha na ala nke jackphone headphone.
iphone 6 anaghị achọpụta wifi
Mkpụrụ osisi okirikiri ahụ bụ otu n'ime ihe ndị na-egosi mmiri mmiri Apple techs na-eji iji chọpụta ma mmiri mmiri abanyela na iPhone gị. Anọghị m ebe a igwu egwuregwu ụta, mana ọ bụrụ na ntụpọ ọcha ahụ agbanyela acha ọbara ọbara, iPhone gị abanyela na mmiri mmiri na oge ụfọdụ, nke ahụ nwekwara ike ịkọwa ihe kpatara esemokwu ahụ.
Tupu anyị achịpụ a software nke, na-agbalị resetting Network Ntọala na gị iPhone site na ịga na Ntọala -> Ozuruọnụ -> Tọgharia -> Tọgharia Ntọala Ntọala . Ettọgharị ntọala ntọala netwọk weghachite Wi-Fi nke gị iPhone, Bluetooth, Ntọala Onwe Gị , na ntọala netwọkụ ndị ọzọ na nrụpụta nrụpụta.
Tupu ịmalite, Otú ọ dị, jide n'aka na ị maara okwuntughe Wi-Fi gị, n'ihi na 'Tọgharia Ntọala Ntọala' ga-ehichapụ ha na iPhone gị. Mgbe iphone gị reghachiri, ị ga - emegharị na netwọk Wi-Fi gị site na ịga na Ntọala -> Wi-Fi.
Ọ bụrụ na ‘Tọgharia Ntọala Ntanetị’ Adaghị Edozi Wi-Fi Antenna My iPhone?
Ahụmịhe m na eriri afọ m na-agwa m na mgbe iPhone nwesịrị, Wi-Fi antenna gị ka ga-achapụ, anyị enwetakwa ihe ngwaike n'aka anyị. Apple agaghị arụzi naanị Wi-Fi antenna na iPhone, yabụ Wi-Fi na-acha uhie uhie pụtara na ị ga-anọchi iPhone gị dum - ọ bụrụ na ị gafere Apple. (Ọ bụrụ na ị nọ n’okpuru akwụkwọ ikike, nke ọ bụla, gafere Apple!)
Ọ bụrụ na ịnọghị n'okpuru akwụkwọ ikike, dochie iPhone site na Genius Bar ma ọ bụ AppleCare bụ ukwuu dị ọnụ ala karịa ịzụta ekwentị ọhụrụ na ọnụahịa mkpọsa, mana ọ ka dịkwa ọnụ ala. Iji malite usoro mmezi, kpọọ ụlọ ahịa Apple dị na mpaghara gị ma setịpụ oge ị ga-eji Genius Bar ma ọ bụ gaa na Apple Nkwado mkpokọta ịmalite usoro nrụzi na ntanetị.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na achọghị m inweta iPhone ọhụrụ?
Ọ bụrụ na ịchọghị mmiri maka iPhone ọhụrụ ọhụụ, ebe ahụ dị nhọrọ ndị ọzọ ị nwere ike ịtụle.
gịnị kpatara na agaghị m ebudata ngwa m na iphone m
Nke mbụ, ana m akwado Pulse , ụlọ ọrụ mmezi nke na-eziga ọkachamara na ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ga-edozi iPhone gị (na mgbe ụfọdụ na ọnụahịa dị ọnụ ala karịa ka ị ga-enweta na Storelọ Ahịa Apple!).
Anyị agụkwala ụfọdụ ndozi ndị na-abụghị ọdịnala maka Wi-Fi na-achagharị agba na iPhone, dịka ịrapara iPhone gị na friji maka minit 15 ma ọ bụ n’okpuru oriọna maka minit 30.
Ahụmahụ Gị na Idozi Wi-Fi Grayed-Na On iPhone
Ka isiokwu a na-echikọta, achọrọ m ịnụ ahụmịhe gị na idozi Wi-Fi na iPhone nke gị na ngalaba ndị dị n'okpuru - ọkachasị ọ bụrụ na ị gafee ịrapara iPhone gị na ngwa nju oyi ma ọ bụ n'okpuru oriọna . Ekwenyesiri m ike na anyị nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ iji dozie nsogbu Wi-Fi na-acha grayed na iPhone gị, m ga-anọkwa gburugburu ịza ajụjụ gị ka ha na-ebili.